तपाईं जेम्स फोले को नाम थाहा छ? म यस्तो मानिसको सुनेका निश्चित धेरै हुँ। तर, जब उहाँको बारेमा कुरा, केही प्रसिद्ध हलिउड निर्देशक र Screenwriter, अन्य मान - जवान अभिनेता, को युवा टेलिभिजन श्रृंखला र सुविधा फिलिमहरु को तारा, र त्यहाँ जो एक फोले जेम्स भिडियो आँखा अघि उठ्छ ती हुन् जहाँ केही वर्ष पहिले उत्साहित सारा सम्म कार्यान्वयन को सभ्य विश्व। यस लेखमा हामी चिरपरिचित निर्देशक कुरा र छोटकरीमा आफ्नो दुई पूर्ण namesakes प्रस्तुत हुनेछ।
Dzheyms Fouli: निर्देशक र लेखक
रहस्यमय विधा को प्रशंसक सबैभन्दा प्रारम्भिक '90 को दशक टिभी श्रृंखला "ट्विन Peaks" वा रोमाञ्चक "डर" मा लोकप्रिय को एक सम्झना हुनेछ। त्यसैले, यी र अन्य धेरै चित्रहरू निर्देशक तीन जेम्स फोले को छ। उहाँले खाडी Ridge, न्यूयोर्क शहर नजिकै स्थित छ जो अमेरिकी सहरमा डिसेम्बर 1953 को अन्त्यमा जन्म भएको थियो। तर, त्यो वेस्ट कोस्ट एक उच्च शिक्षा गो प्राप्त थियो र विश्वविद्यालय दक्षिणी क्यालिफोर्निया मा भर्ना।
उहाँले एक निर्देशक रूपमा काम गरे जो आफ्नो पहिलो प्रमुख काम चलचित्र "निडर।" थियो फोले3वर्ष को लागि यो खिच्नुभयो र अन्तमा 1984 मा दर्शक एक तस्वीर प्रस्तुत गर्न सक्षम थियो। तपाईंले यो रील sverhosobennoy कल गर्न सक्दैन, तर त्यो दर्शक मन पराएका, र तब देखि उनि जाने चाहन्छु। यसलाई आफ्नो जीवनको, यो आफ्नो व्यक्तिको पेशा हो - जेम्स कि निर्देशन बुझे। हामी यसलाई सफल क्यारियर विचार गर्न सक्छौं?
पहिलो पटक उहाँले "ध्यान मा" फिल्म निर्देशक रूपमा 1986 मा नामांकित भएको थियो। दोस्रो पुरस्कार पनि चित्रकला "को अमेरिका" (1992) को लागि थियो। पर्व भेनिस "स्वर्ण सिंह" को न्यायपीठ को एक विशेष पुरस्कार - 39 वर्ष को उमेर मा Fouli Dzheyms को "रजत सिंह" जित्यो। र यो पक्कै पनि जवान निर्देशक लागि एक उत्कृष्ट परिणाम हो। तथापि, क्यारियर को अधिक वर्ष असफलता थिए: "? यो केटी हुनुहुन्छ" पाँच वर्षअघि 1987 मा, आफ्नो चित्रकला पप diva Madonna को सहभागिता साथ एक वर्षमा सबैभन्दा खराब रूपमा मान्यता छ, र जेम्स को "स्वर्ण रास्पबेरी" को लागि नामांकित भएको थियो। तथापि, उहाँले यो निराशाले लागि कारण हुनुपर्छ छैन, कि यो जो कोहीले पनि सबैभन्दा प्रतिभाशाली निर्देशक के सक्ने आफूलाई निर्णय गरे।
जे चलचित्रहरू। फोले
पहिले नै उल्लेख रूप मा, निर्देशक को पहिलो काम "निडर" को तस्वीर थियो (1984) नेतृत्व भूमिकाको मा Aidan क्विन र Deril Hannoy। यो युवा चित्रकला एकदम सफल र राम्रो तरिकाले स्थापित आफूले पाएको नयाँ निर्देशक भएको छ। त्यसपछि 1986 मा उनले Shonom Pennom संग "खाली बिन्दु" फिलिम पनि लिए, र एक वर्ष पछि फिल्म आए "यो केटी हुनुहुन्छ?" Madonna - पत्नी संग। तपाईंले पहिले नै थाह छ, यो चित्र महिमा फोले खराब निर्देशक ल्याएको छ। (1990) र Madonna: मनाउन (2009): तैपनि, उहाँले दुई पटक गायक आफ्नो चित्रहरु मा, "सही संग्रह Madonna" गोली। उहाँले पनि आफ्नो भिडियो केही लेखक छ: पापा, प्रचार बताउन, साँचो निलो प्रत्यक्ष नगर्नुहोस्। तर, क्रेडिट मा, तपाईं आफ्नो नाम यहाँ उहाँले पत्रुस Parker को नाम अन्तर्गत कार्य किनभने देख्नेछन्।
1991 मा, पहिले नै एकदम प्रसिद्ध निर्देशक Fouli Dzheyms टेलिभिजन श्रृंखला "ट्विन Peaks" फिलिम थाले, र एक वर्ष पछि, आफ्नो चित्रकला "द अमेरिका" को भेनिस तिहार मा न्यायपीठ द्वारा भेट्यो थियो, र उहाँले पुरस्कार "रजत सिंह" सम्मानित गरिएको थियो। यो पुरस्कार थप उत्पादक कामको लागि एक अद्भुत उत्तेजना थियो। "बिट" (1995), "डर" र "क्यामेरा" (1996), "शट" (1997), "द Corruptor" (1999): 1992 देखि 1999 को लागि अन्तराल मा, त्यो5तस्वीर गोली व्यवस्थित।
त्यसपछि त्यहाँ आफ्नो रचनात्मक जीवन एउटा सानो ब्रेक थियो। यसको गतिविधिहरु यो केवल4वर्ष पछि फेरि सुरु गरियो। त्यसपछि Dzheyms Fouli, निर्देशक र Screenwriter, आफूलाई पूर्णतया फरक दृष्टिकोण मा देखाउन सक्षम थियो। "सही अजनबी" - 2004 मा, त्यो फिल्म "हलिउड प्रभाग" निर्देशित, र दुई वर्ष पछि। यसबाहेक, 2013 मा, फोले दुई लोकप्रिय टिभी श्रृंखला को फिलिम थाले। यो3वर्षको लागि हावा मा बसे जो, को "कार्ड को घर", र एक ऐतिहासिक फिल्म थियो "हन्निबल।" तिनीहरूलाई साथ उहाँले 2014 मा चित्र "रातो क्षेत्र" गोली गर्न थाले।
सेप्टेम्बर 2015 मा बारेमा जन। फोले सम्पूर्ण चलचित्र संसारमा बताउनुभयो। धेरै मुद्रित प्रकाशनहरू यस्तो शीर्षक यहाँ पाउन सकिन्छ: ग्रे को 50 रंग "को लडी" कार्ड को घर "" को लेखक हटाउने "अनि कुरा प्रशंसित फिलिम, शमू Teylor Dzhons, निर्देशक चित्र को लडी र Dzheyms Fouli फिर्ता गर्न इन्कार थियो। र "स्वतन्त्रता को पचास Shades" (2017 मा जारी लागि निर्धारित) (बाहिर 2018 मा "गाढा 50 Shades मा": (फोटो जो तपाईं लेखमा देख्न सक्छन्), दुई उपन्यास को लेखक, कामुक लेखक ईएल जेम्स को नयाँ अनुकूलता बन्न सहमत छ ) .. वैसे, कास्ट wasps जारी हामी दुई निर्देशक को काम तुलना गर्न अवसर पाउनेछन् भन्ने हो जो एउटै, avatsya।
अभिनेता Dzheyms Fouli: Filmography
Eau Clair (विस्कन्सिन), संयुक्त राज्य अमेरिका को शहर मा 1983 मा जन्म प्रसिद्ध निर्देशक, फिलिम र टेलिभिजन श्रृंखला को एक युवा अभिनेता को namesake। आफ्नो पूरा नाम - जेम्स Edvin Fouli। जवान केही प्रतिभा छ। काम अभिनय गर्न साथै, उहाँले पनि संगीत लेखे र novelist र Screenwriter रूपमा आफ्नो हात खोजे। चलचित्रमा कार्य गर्न, उहाँले 2002 मा सुरु भयो। आफ्नो चलचित्र को पहिलो तस्वीर "दिग्गज स्वप्नलोक" थियो र फिल्म श्रेणीमा "को डाँकुहरूको" "डरलाग्दा" र टमी मा मेसन को भूमिका पालना गर्नुहोस्। जवान अभिनेता, सुन्दर तरिकाले निर्माण, सेक्सी र एकदम पत्यार पार्र्ने छ। यो युवा श्रृंखला को फिलिम समयमा अपरिहार्य छ किन कि छ। "सँगै बस्दा नियम", "H2O चरम",: यहाँ तिनीहरूलाई केही छन् "बीटा हाउस: स्नातक", VS: चलचित्र, र अन्य।
एक photojournalist को कथा
उत्तर पश्चिमी सिरियाको आतंकवादियहरुको LIH द्वारा kidnapped एक स्वतन्त्र photojournalist समाचार एजेन्सी "विश्व पोस्ट", - थप यस लेखमा हामी जेम्स फोले (याकूब राइट फोले) को तेस्रो को कथा भन्नेछु। कुनै लगभग 2012 सम्म माथि, जसको जीवनी Dzheyms Fouli नाम एक मानिस छ एक, रुचि थियो मानिसहरूको सानो सर्कलमा परिचित थियो, तर पछि आफ्नो नाम र फोटो टेलिभिजनमा निरन्तर थिए। ग्रह मा लगभग हरेक मानव मा रुचि को पत्रकार को भाग्य।
पत्रकारिता को आगमन
उहाँले नयाँ हैम्पशायर मा जन्म भएको थियो अक्टोबर 18, 1973। आफ्नो परिवारको सबै पाँच जना छोराछोरी संग, त्यो क्याथोलिक विश्वास हुर्केका थिए रूपमा उहाँले, Kingswood क्षेत्रीय हाई स्कूल मा अध्ययन त्यसपछि मार्क्वेट्टे विश्वविद्यालयमा भर्ना र 1996 मा सम्मान संग स्नातक। विश्वविद्यालय "नोर्ड-पश्चिम" को मा पत्रकारिता को medillskoy स्कूल मा - कि पछि, त्यो स्कूलमा सिकाउन थाल्नुभयो, उहाँले मैसाचुसेट्स 'अम्हर्सट' र त्यसपछि को विश्वविद्यालय मा आफ्नो पढाई जारी राखे। कि पछि उहाँले photojournalism उठाए। एक स्वतन्त्र पत्रकार रूपमा अफगानिस्तान मा - 2009 मा, USAID सञ्चालित एक कार्यक्रमको भागको रूपमा, जेम्स इराक गए, र एक वर्ष मा।
भाग्य वा खराब भाग्य
प्रारम्भिक 2011 मा, त्यो साप्ताहिक ताराहरु र धर्काहरू संग सहकार्य थाले। केही महिनापछि फोले Muammar गद्दाफी को समर्थकहरूको, लिबिया पक्राउ गरिएको थियो। उनको सहयोगिहरु को एक जनाको मृत्यु भएको थियो र कैद आफ्नो 44 दिन पछि जारी। पछि, एक साक्षात्कार गर्न "द्वि-द्वि-सी" स्वतन्त्र Fouli Dzheyms आफ्नो पूर्व जो संघर्ष क्षेत्रमा पाउन सकिन्छ नाटक, आकर्षित, र उहाँले सबै यसको बारेमा दुनिया बताउन चाहन्छ भन्नुभयो। के त्यहाँ जाँदै गर्नुपर्छ, यो फरक कोणबाट छ। उहाँले पनि belligerents को मनसाय चिन्तित थियो। उहाँले Muammar गद्दाफी मृत्यु भएको ठाउँमा फर्कन निर्णय किन हो।
आफ्नो जीवन को पीछा मा
2012 मा उहाँले एक स्वतंत्र पत्रकार रूपमा "प्रशंसक-प्रेस" साथ दिए। taftanaz एउटा यात्राको समयमा नै वर्ष को 22 नोभेम्बर (सिरिया) फोले, एक सहकर्मी आतंकवादियहरुको द्वारा kidnapped थियो साथ। आफ्नो परिवार यो समय उहाँले कैद बाहिर प्राप्त गर्न सक्षम हुने विश्वास गरे।
पछि संसारमा मिडिया उहाँले फ्री सिरियाली सेना द्वारा detained थियो, र त्यसपछि त्यो LIH बेचिएको प्रकाशन गरेका थिए। दुई वर्ष पछि उहाँले beheaded थियो, र यो क्रूर सजाय भिडियोमा खिच्नुभयो थियो। अमेरिकी मनोवृत्ति आतंकवादियहरुको विशेष गरी क्रूर थिए कैदी यूरोप, भन्न फोले गर्न। तर, त्यो सबै परीक्षा सहे। सम्पूर्ण सभ्य संसार ठेस को क्रूरता द्वारा स्तब्ध भयो, आफ्नो परिवारको पूर्ण भताभुंग भयो। तपाईं कसरी बाँच्न सक्छ?
क्रूरता र चरम हिंसा को यो कार्य एक प्रत्यक्ष प्रमाण पनि सभ्य मान्छे र आदिवासीहरूले साझेदारी दुर्गम खाली छ।
को "Vintage" अन्ना Pletnev को Soloist: जीवनी, रचनात्मकता, व्यक्तिगत जीवन
अभिनेत्री Darya Egorova: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, Filmography, फोटो
अभिनेता Demien Lyuis: जीवनी, Filmography, व्यक्तिगत जीवन र रोचक तथ्य
कसरी क्रस-सन्दर्भ सिर्जना गर्न?
बिछाउने hens प्रकार
सबै तारा Dzhennifer Uestfeld
शिक्षाविद् Skryabin - एक राजधानी पत्र संग एक मानिस
कसरी multivarka मा कुखुराको पखेटा खाना पकाउनु?
"भिक्टोरिया" मास्को मा पसलहरूमा। ठेगाना, सुविधाहरू, लाभ सुपरमार्केट
सजावट र आत्म-अभिव्यक्ति फारम रूपमा हार
मालवेयर। मालवेयर हटाउन कार्यक्रम